FAA: Mitombo ny fitokonana amin'ny laser na dia vitsy aza ny fiaramanidina manidina
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » FAA: Mitombo ny fitokonana amin'ny laser na dia vitsy aza ny fiaramanidina manidina
Ny FAA dia miara-miasa akaiky amin'ireo masoivoho mpampihatra lalàna federaly, fanjakana ary eo an-toerana hanenjehana ny sazy sivily sy heloka bevava atao amin'ireo olona mikendry laser amin'ny fiaramanidina
Lasera matanjaka be dia be no afaka manamboatra fiaramanidina manidina izay mety hitondra mpandeha an-jatony
FAA dia mandray andraikitra amin'ny fampiharana ireo olona izay manitsakitsaka ny Fitsipika momba ny sidina federaly amin'ny alàlan'ny famirapiratana amin'ny laser amin'ny fiaramanidina ary mety hametraka sazy sivily hatramin'ny $ 11,000 isaky ny fandikana.
Ny FAA dia nametraka sazy sivily hatramin'ny $ 30,800 amin'ny olona noho ny tranga laser maro
Ny fitokonana tamin'ny laser tamin'ny mpanamory fiaramanidina dia nitombo tamin'ny taona 2020 na dia nihena tanteraka aza ny fivezivezena tamin'ny fifamoivoizana. Tamin'ny taona 2020, nitatitra fitokonana tamin'ny laser 6,852 tamin'ny FAA ny mpanamory fiaramanidina. Fiakarana avy amin'ny fitokonana tamin'ny laser 6,136 notaterina tamin'ny taona 2019 ary io no isan'ny avo indrindra voalaza tamin'ny masoivoho hatramin'ny 2016.
The Federal Aviation Administration (FAA) miambina hatrany amin'ny fanentanana momba ny fampiasana laser tsy araka ny tokony ho izy rehefa manondro ny fiaramanidina izy ireo. Ny laser kendrena fanahy iniana atao amin'ny fiaramanidina dia miteraka loza mitatao amin'ny mpamily ary mandika ny lalàna federaly. Lasera matanjaka be dia be no afaka manamboatra fiaramanidina manidina izay mety hitondra mpandeha an-jatony.
Ny FAA dia miara-miasa akaiky amin'ireo masoivoho mpampihatra lalàna federaly, fanjakana ary eo an-toerana hanenjehana sazy sivily sy heloka bevava atao amin'ireo olona mikendry laser amin'ny fiaramanidina iray. Nandray andraikitra tamin'ny fampiharana ireo olona izay manitsakitsaka ny Fitsipika momba ny sidina federaly ny maso ivoho amin'ny alàlan'ny famirapiratana amin'ny laser amin'ny fiaramanidina ary mety hametraka sazy sivily hatramin'ny 11,000 $ isaky ny fandikan-dalàna. Ny FAA dia nametraka sazy sivily hatramin'ny $ 30,800 amin'ny olona noho ny tranga laser maro.